That's so good, right?: July 2012
Posted by Alex Aung at 8:10 PM No comments:
ဘာကြောင့်ယောက်ျားလျာတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို စဉ်းစားသင့်သလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့် ယောက်ျားလျာတွေဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေနှင့် မလိုချင်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြေ နည်းပါးကြပါတယ်။ သို့သော် လည်း မိန်းမအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ အမြဲတမ်းတော့ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတယ်၊ အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင် ပါဘူး။ ယောက်ျားလျာတွေဟာလည်း ယောက်ျားများနှင့် လိင်ဆက်ဆံသော အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ဘာပါလဲ
HIV အပါအ၀င် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ ကူးစက်ခြင်းမခံရဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ယောက်ျားလျာတွေ ဟာလည်း ထိုရောဂါတွေ မကူးစက်ခံရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောအရည်များ ဥပမာ-သွေး၊ မိန်းမကိုယ်မှထွက်သောအရည်များကို လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ၀င်ရောက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ရပါမယ်။ Sex toys လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းများကို ဝေမျှမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ အကယ်၍ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ဟာ ကွန်ဒုံး အသစ် တစ်ခု သီးသန့်အသုံးပြုရပါမယ်။ ဖက်ခြင်း၊ ထိတွေ့ကိုယ်တွယ်ခြင်း၊ နှိပ်နယ်ခြင်း၊ မိမိဘာသာမိမိ လိင်ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်းတို့က တော့ ယောက်ျားလျာများအတွက်ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေနည်းပါးစေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေယုန်စတဲ့ အချို့သော ရောဂါပိုးတွေဟာ အရေပြားချင်း ထိတွေ့မိရုံနဲ့ ကူးစက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ရောဂါပိုးကူးစင်တဲ့သူနဲ့ လိင် ဆက်ဆံတာက တော့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားလျာများ ကူးစက်ခံရနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများဟာ ဘာပါလဲ
ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးသော်လည်း ပါးစပ် သို့မဟုတ် ခံတွင်းတွင် အနာတစ်ခုခု၊ ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရှိနေပါက HIV ကူးစက်ခံရ နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းဟာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်တွင် အနာတစ်ခုခု ခံစားနေရပါက သို့မဟုတ် ရာသီသွေးဆင်းနေစဉ် Oral Sex ပြုလုပ်ပါက ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားနေပါတယ်။
- လိင်ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းများကို ဝေမျှသုံးစွဲခြင်း
Vibrators ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများမှာ များသောအားဖြင့် မိန်းမကိုယ်အရည်များ၊ သွေးများ ပေရေနေတတ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလျာများဟာ ထိုအရာများကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုဘဲ တစ်ယောက်တစ်ခုစီ အသုံးပြုရန် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ထိုပစ္စည်းတွေကို အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပြီး သန့်စင်အောင်ထားရှိရပါမယ်။
- ကြမ်းတမ်းစွာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း
ကြမ်းတမ်းစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာအနာတရရပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင် ခြေများ စေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားလျာတွေဟာ ကလေးလိုချင်တဲ့အခါ အလှူရှင်ထံမှ သုက်ပိုးကိုရယူလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ရယူတဲ့အခါ အလှူရှင်ဟာ မူးယစ် ဆေးဝါးများ သုံးစွဲဖူးသလား၊ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရာဇ၀င်များကို သိရှိထားပြီး HIV အပါအ၀င် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားသူတွေဆိုရင်တော့ ထိုသူရဲ့သုက်ပိုးမှတစ်ဆင့် HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေများသော ယောက်ျားလျာများကတော့
အမျိုးသားနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသော ယောက်ျားလျာများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသွင်းသုံးစွဲသောယောက်ျားလျာများ၊ အန္တရာယ်များသော လိင်ဆက်ဆံသည့်နည်းများ အသုံးပြုသောယောက်ျားလျာများဖြစ်ပါတယ်။
Credit: Health Digest Journal – Vol. (9), No. (35) 18-7-2012
Posted by Alex Aung at 10:35 PM No comments:
မိန်းမလျာ များကို နှစ်သက်ခြင်း၊ မနှစ်သက် ခြင်းဟာ လူတစ်ဦး ချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိက
ခံစားချက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ် ပွင့်လင်းပါတယ်
ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေ မှာ တောင်မှ
မိန်းမလျာဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူများ Anti- gay Activists ရှိပြီး သူတို့က
မိန်းမလျာတွေကို မကျန်းမာသူများ (Sick) အဖြစ်၊ ပြီးတော့ HIV/ AIDS
ရှိနေတဲ့သူများ အဖြစ် ရှုမြင်ကြတယ်။ သို့သော် ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့
ကျင့်ဝတ်တွေအရ မိန်းမလျာတွေဟာ လည်း လူထဲက လူတွေပဲမို့ သူတို့ရဲ့
ကျန်းမာရေးကိစ္စဟာ လျစ်လျူမရှုသင့် တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမလျာ တွေမှာ
ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီ ဆိုရင် (ဥပမာ- HIV) သူမှတစ်ဆင့် လိင်တူလိင်ကွဲ
ဆက်ဆံသူအမျိုးသား (Bisexual Men) မှတစ်ဆင့် အမျိုး သမီးများနှင့်
ဒါကြောင့် အချို့သော ကျန်းမာရေး ပြဿနာ များကို ပညာပေးဖို့ ဦးတည်ချက်ထား
တဲ့အုပ်စု Target Groups ထဲမှာ မိန်းမလျာများလည်း ပါဝင်လာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သင်ဟာတစ်ဦး ချင်းခံစားချက်အနေနဲ့ မိန်းမလျာ များကို မနှစ်
သက်ဘဲရှိနေနိုင်သော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး သို့မဟုတ်
စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ တစ်ဦး၊ ဒါမှမဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း အကျိုးပြု
ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုမှာ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးအနေနှင့်ဆိုပါ လျှင် မိန်းမလျာများ
ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိသော အတားအဆီးများကို လျှော့ချ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ
ဆိုတော့ သင်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ မိန်းမလျာ၊ ယောကျာ်းလျာဆိုသော
လူတန်းစား တစ်ခု တည်ရှိနေတာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ အသက်တွေ ကယ်တင်ဖို့ အတားအဆီးတွေကို ရပ်တန်းကြပါစို့ (Recognizing
Barriers, Saving Lives)
သူတို့ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အတား အဆီးတွေကတော့-
- အသက်အာမခံ ရရှိမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်း
နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်များစွာဟာ လက်မထပ်ထားတဲ့
စုံတွဲ Unmarried Partners တွေကို ကာကွယ်မပေး ထားပါဘူး။
- ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရမှုကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်း
လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ မိန်းမလျာ၊ ယောကျာ်းလျာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို
ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ မှာ စိုးတဲ့အတွက် ဖွင့်မပြောပြကြဘူး။ အဲဒါဟာ မိန်းမလျာနဲ့
ဆရာဝန်ကြား က ကုသမှုအတွက် အားကောင်းတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
မသိတဲ့အတွက် ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ သီးသန့်အကြံဥာဏ် မပေးနိုင်ခြင်းမျိုး ပေါ့။
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ခြင်း
အချို့သော မိန်းမလျာတွေဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးက
သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ဖူးရင် နောက်ပိုင်းမှာ ဆေးကုသမှု ဒါမှမဟုတ်
ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ဖြစ် တော့တာ၊ သွားရောက် မတွေ့ဆုံတော့ တာ၊
ဒါမှမဟုတ် နှောင့်နှေးနေ တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပြု လုပ်ရမယ့်
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု တွေ၊ စောစီးစွာစစ်ဆေးကြည့်ရမယ် ရောဂါရှာဖွေမှု
စမ်းသပ်ချက်တွေကို မပြုလုပ်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာမှ သိရတဲ့အခါ
ကုသမှုခက်ခဲတတ်ပါ တယ်။ လက်မလျှော့ပါနှင့်။ သင်တို့ အား ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်
ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည် ရှိသော် လေးစားသော ကုသမှု
Respectful Care ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်း ကို ရှာဖွေပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့
မိန်းမလျာ၊ ယောကျာ်းလျာ အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ သီးသန့်ကျန်းမာ
အဲဒီ လိုမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်း ပိုမိုလူသားဆန် တဲ့ ကုသမှုပေးသူတွေ အများကြီး
ရှိနေပါတယ်။ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ။ CDC ရဲ့ အစီရင်ခံစာများအပေါ် အခြေခံပြီး
သုံးသပ်ချက်အရ အမေ ရိကန်အမျိုးသားတွေရဲ့ အနည်း ဆုံး ၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာ
မိန်းမလျာ (Gay) များဖြစ်ကြပြီး၊ ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ မိန်းမလျာ သို့မဟုတ်
လိင်တူ လိင်ကွဲ နှစ်မျိုးဆက်ဆံသူ (Gay or Bisexual) ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်မှာ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မှာ HIV ရှိနေကြောင်း အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူတွေရဲ့ ထက်
ဝက်ကျော်ဟာ မိန်းမလျာများဖြစ်ပါ တယ်။
Journal Sexually Transmitted Infections မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ခုအရ
မိန်းမ လျာတွေဟာ သာမန်အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် ဘာကြောင့် HIV
ပျံ့ပွားမှုနှုန်း များနေရတာလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ သုတေသနရဲ့ အဖြေ ကတော့
မိန်းမလျာတွေ HIVကူးစက် မှုများရခြင်းဟာ စအိုမှတစ်ဆင့် လိင် ဆက်ဆံခြင်း (Anal
Sex)ဟာ Vaginal Sex ထက် HIV ပိုး ကူးစက်မှုနှုန်း ပိုများလို့ပဲဖြစ်တယ်။
CDC ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေ ရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ HIV/AIDS ရှိနေသူတွေရဲ့ ၅၀
ရာခိုင်နှုန်းဟာ ယောကျာ်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသူများဖြစ် တယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်စဉ် HIV
ပိုးအသစ် တွေ့ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း ဟာလည်း ယောကျာ်းချင်း လိင်ဆက်
ဆံသူတွေဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းရရင် အမေရိ
ကန်ပြည်ထောင်စုမှာ HIV/AIDS ရှိသူ မိန်းမလျာပေါင်း ၆၃၅၀ဝ၀ ဦးခန့်ရှိပြီး
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ မိန်းမလျာဦးရေရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ် ပါတယ်။
HIV ပိုးရှိနေတဲ့ မိန်းမလျာ အများစုဟာ ပိုးရှိ၊ မရှိ သွေးစစ်ကြည့် ခဲ့ဖို့
HIV ပိုးရှိ နေတယ်လို့သိရှိရခြင်းဟာ ခံနိုင်ရည် ရှိဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
မသိရှိ ခြင်းက ကာယကံရှင်ရော၊ အခြားသူ တွေရဲ့ အသက်ကိုပါ အန္တရာယ်ကျ
ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် HIV ပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းက အရေးပါပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစစ်ဆေးမှုထက် ပိုအရေးကြီးတာက HIV ရောဂါ မပျံ့ ပွား မကူးစက်အောင်
ကာကွယ်မှု (Prevention) ပါပဲ။ အဲဒီကာကွယ်မှု ကို လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အစည်း
တွေက ပညာပေးရမှာ မှန်ပေမယ့် တကယ်လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမှာက တော့ မိန်းမလျာတွေ
ဒါကြောင့် မျိုးဆက်သစ်မိန်းမလျာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဦးဆောင်သူတွေဟာ HIV
ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက် တွေမှာ ပိုမိုပါဝင်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမလျာတွေနဲ့
Bisexual Men တွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့ HIV ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု များ၊
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ရေးမှာ
အတားအဆီးဖြစ်နေတာကတော့ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရခြင်းနှင့် လိင်တူခြင်း (ယောကျာ်းများ)
ရဲ့ ကြောက်ရွံ့မုန်းတီး မှုဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရာလေး - မိန်းမလျာများနှင့် HIV သို့မဟုတ် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပြီးအသက်များကို ကယ်တင်ခြင်း
Posted by Alex Aung at 6:17 PM No comments:
Penile Injection Therapy ကျား-အင်္ဂါကို ဆေးထိုးကုသခြင်း
ယောက်ျားအင်္ဂါကြီးဆေး ထိုးရင် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလဲ။ နောက်ပြီး ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို သိချင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ သိချင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် အဲဒါဟာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲ သိချင်ပါတယ်။
အင်္ဂါကြီးစေချင်တာအတွက်ဆိုရင် Penis enlargement (2) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/penis-enlargement-2.html ကို ဖတ်ပါ။ ဒီစာမှာ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဖြစ်နေသူတွေအတွက် ယောက်ျား လိင်တံကို ဆေးထိုးပေးနည်းကိုသာ ရေးပါမယ်။
ယောက်ျား လိင်တံကို ဆေးထိုးပေးနည်းဟာ Erectile Dysfunction (ED) ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်နေသူတွေအတွက် ယာယီ ကုသနည်းဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးနည်းကို စနစ်တကျ သင်ယူထားပြီး ကိုယ်တိုင် ထိုးလို့ရတယ်။ ကိုယ့် ဇနီး (အဖေါ်) ကို သင်ပေးထားလဲရတယ်။ ဆေးကို အရေပြားအောက်မှာ ထိုးရတာ မဟုတ်ဘူး။ လိင်တံထဲ ထိုးရတယ်။
1. Prostaglandin E1 (Alprostadil) (အယ်လ်ပရိုစတာဒဲလ်)၊
2. Phentolamine (Regitine) (ဖင်တိုလာမင်း) နဲ့
3. Papaverine hydrochloride (ပါပါဗရင်း) ဆေးတွေကို သုံးတယ်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်ကတည်းက Papaverine ဆေးကို စတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၃ ကစပြီး Papaverine နဲ့ Phentolamine တွေကို သုံးနေတယ်။ Papaverine ကိုသုံးနေတာ ၂၅ နှစ်ကျော်ပြီ။ စိတ်ချရတယ်။ 0.5 mg to 1 mg သာထိုးရတယ်။ Alzheimer’s disease နဲ့ Multiple Sclerosis ရောဂါတွေအတွက်လဲ သုံးနေတယ်။ Prostaglandin E1 ကိုသုံးလာတာ ၂-၃ နှစ်သာ ရှိသေးတယ်။ Papaverine and Phentolamine ဆေးရည်က ၂ လအထိ အထားခံတယ်။
• ဆေးကို တလမှာ ၁ဝ ခါသာထိုးသင့်တယ်။
• လိင်တံမှာ ဘယ်-ညာ ပြောင်းထိုးသင့်တယ်။
• ၁ဝ-၂ဝ မိနစ်အတွင်း သန်မာမှုရစေတယ်။ Prostaglandin E1 က နဲနဲ ပိုမြန်တယ်။
• ဆေးထိုးတဲ့နေရာကို ၃-၅ မိနစ်ကြာ ဖိထားသင့်တယ်။
• သန်မာနေချိန် ၂ဝ မိနစ်ကနေ ၁ နာရီ၊ ၁ နာရီခွဲအထိ ကြာတယ်။
• ၈ဝ% လူနာတွေမှာ အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ သိရတယ်။
• Orgasm (အော်ဂဇင်) ရတာကို သက်ရောက်မှု မရှိဘူး။
• လူနာ ၃၇% က နဲနဲကနေ အသင့်အတင့်အထိ နာတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဆေးထိုးပြီး ၅-၂ဝ မိနစ်နာတယ်။ မတ်တပ် ရပ်နေရင် ပိုနာတယ်။ လိင်အင်္ဂါ သန်မာမှု ကျသွားရင် မနာတော့ဘူး။
(၁) Caverject ထိုးဆေးမှာ Alprostadil (Prostaglandin E1) ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ ဆေးထိုးတဲ့နေရာ အတွင်းထဲမှာ သွေးယို-သွေးခဲ ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာတယ်။ တခါမက ထပ်ထပ်ထိုးရင် အပ်နဲ့ ထိုးတဲ့နေရာ၊ ဆေးဝင်တဲ့နေရာမှာ အတွင်း အမာရွတ်တွေ ဖြစ်မယ်။ Plaque လို့ခေါ်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး Peyronnie's disease လိင်အင်္ဂါ ကောက်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။ Priapism ခေါ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါ တောင့်တင်းနေတာက ပြန်မကျနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = နှလုံးခုန်မမှန်၊ သွေးဖိအားကျ၊ အင်္ဂါသန်မာချိန်မှာ နာခြင်း၊ ဆီးသွားချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အင်္ဂါထဲမှာ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ သုက်လွှတ်စောခြင်း၊ သုက်လွှတ်နောက်ကျခြင်း၊ တက်စေ့ရောင်ခြင်း၊ မှိုပိုးဝင်ခြင်း၊ ပန်းအဖျား အရေပြား တင်းနေခြင်း၊ သွေးခြည်ဥခြင်း၊ ဆီးလမ်းကသွေးထွက်ခြင်း၊ ဆေးထိုးတဲ့နေရာ ရောင်-နီ-ယားခြင်း။
Precautions သတိထားစရာတွေ -
• နေ့တိုင်းမထိုးသင့်ဘူး။ နှစ်ရက်ဆက်လဲ မထိုးသင့်ဘူး။
• ယောက်ျားတွေအတွက်သာ ဖြစ်တယ်။
• Drepanocytosis, Plasma cell myeloma, or Leukaemia ရောဂါရှိသူတွေ မထိုးသင့်ဘူး။
• Deformed penis လိင်တံပုံမှန် မဟုတ်သူ၊ Penis implant လိင်တံအတုထည့်ထားသူ၊ Scar on the penis လိင်တံမှာ အမာရွတ်ရှိနေသူ၊ Small foreskin ပန်းအဖျားအရေပြား သိပ်တိုနေသူတွေ မထိုးသင့်ဘူး။
• Aspirin, Plavix TM, Warfarin/Coumadin လို သွေးကျဲဆေး သုံးနေရသူတွေ လုံးဝ မသုံးသင့်ပါ။ သွေးယိုတာ များမယ်။ ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ရအောင်တော့ မဆိုးပါ။ ပျောက်ဘို့ အချိန်ယူမယ်။
• ဆေးထိုးနည်း ဂရုမစိုက်ရင် ပိုးဝင်တာလဲ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်နိုင်တယ်။
(၂) Papaverine ဆေးက Vasodilator ဆေးဖြစ်တယ်။ အစာလမ်း၊ သည်းခြေလမ်း၊ ဆီးလမ်းမှာ နာတာတွေ အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်ထဲ သွေးယိုတာအတွက်လဲ သုံးတယ်။ (မိုင်ဂရင်း) အတွက်လဲ တချို့က သုံးတယ်။ သူတမျိုးထဲဖြစ်ဖြစ် တွဲသုံးတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တယ်။ လိမ်းဆေးအနေနဲ့လဲ လာတယ်။ <ဆေးထိုးတဲ့သူ ၅ဝ% က ဆေးထိုးအပ် ကြောက်လို့ ဆက်မထိုးတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် လိမ်းဆေးကို စမ်းသပ်တယ်။ တကယ် ပန်းသေ-ပန်းညှိုးနေသူ ၂ဝ ကို စမ်းခဲ့တယ်။ ၁၇ ယောက်က စမ်းသပ်မှုအပြီးထိ လိုက်နိုင်တယ်။ ၁၃ ယောက်က ခါးရိုး ထိခိုက်ထားရသူတွေ ဖြစ်တယ်။ Papaverine base gel 15% and 20% လိမ်းဆေးကို ကပ်ပယ်အိတ်၊ လိင်တံနဲ့ အနီးတဝှိုက်နေရာတွေကို လိမ်းစေတယ်။ ကောက်ချက်ကတော့ Papaverine gel လိမ်းဆေးဟာ စိတ်ချရတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = မျက်နှာနီမြန်း၊ ချွေးထွက်၊ အရေပြားနီ၊ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံးခုန်မြန်၊ အစားပျက်၊ အသားဝါ၊ (အီယိုဆင်နိုဖိးလ်) များ၊ သွေးမှုံနည်း၊ အသဲရောင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ (အလာဂျီ) ရတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
(၃) Phentolamine (Regitine) ဆေးကို အရေးပေါ်သွေးတိုး ဖြစ်တာအတွက် သုံးတယ်။ လိင်တံသန်မာလာအောင် လိင်တံထဲ ထိုးရတဲ့ဆေးအဖြစ်လဲ သုံးတယ်။ သွားနုတ်ရာမှာ ထုံဆေးပျယ်အောင်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ Myocardial infarction နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရှိသူ၊ ဖြစ်ဘူးသူတွေ မသုံးရဘူး။
Credit: Penile Injection Therapy ကျား-အင်္ဂါကို ဆေးထိုးကုသခြင်း
Posted by Alex Aung at 1:24 PM No comments:
စည်သူနှင့် ကျွန်တော်က ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်တစ်ခုတည်းမှာ အတူတူတက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲ အတူတူငှားနေဖြစ်တာလည်း (၆)လလောက်ရှိပါပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိကြပါဘူး။ အခန်းငှား နေတာ ကျောင်းသားတွေအတွက် မထူးတဲ့ကိစ္စလို့ ပြောရင်ရပေမယ့် နေရာအကွက်အကွင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာ ငှားနေဖို့ကျတော့ တစ်ယောက်တည်းဆို မတတ်နိုင်တာကြောင့် အတူငှားနေဖို့ အခန်းဖော်လိုချင်ကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာ စည်သူနှင့် တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ အိမ်ကခွဲခွာပြီး ကျောင်းလာတက်ရတဲ့ ပထမနှစ်ကာလဟာ ယောက်ျားလေးတွေအတွက် အတော် သာယာတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောရရင် ငွေကြေးပြဿနာပဲရှိတတ်တယ်။ တခြားကိစ္စတွေကတော့ တက်ကြွတဲ့ လူငယ် တွေဆိုတော့လည်း သတိမမူမိပါဘူးလေ။ တိုက်ခန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ထားတာက များတော့ မဆိုးပါဘူး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်။ မသကာ ကိုယ့်ရည်းစားကောင်မလေးတွေ ခေါ်လာလည်း အဆင်ပြေမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းနှင့်ကိုယ် မသောင်းကြမ်းကြပါဘူး။ (၁၉)နှစ်အရွယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ အားကစားသမားတွေလို ကျစ်လစ်သွယ် လျပါတယ်။ အားကစား လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန် တိုင်း ကျောင်းမှာအမြဲလို တက်ကြွနေကြသူများ ဆိုတော့ ကောင်းသင်ခန်းစာတွေလေ့လာရာမှာ ထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းနေတာမျိုး မဖြစ်ကြပါဘူး။
စည်သူ ထိုင်ချထားရာကနေ ကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်ရာ အိပ်ခန်းရှိရာကို လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ပြောသာပြောနေတယ် သိပ်မသေချာသေးပါဘူး။ စိတ်ထဲဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်နေပါသေးတယ်လေ။ ပြောသလိုမလုပ်ဖြစ်ရင် ယောက်ျားမပီသဘူးပြောမှာ စိုးရိမ်မိ တာလည်းပါရဲ့။ စည်သူ့ကြည့်ရတာကတော့ သူ့စိတ်ကူးနှင့် သူမြောနေပြီထင်ပါတယ်။ စည်သူ့ကို အိပ်ယာပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်ဖို့ ပြောလိုက်တာ သူကခြေထောက်တွေကို ခပ်ကားကားထားရင်း ကျွန်တော့်စကားကိုနားထောင်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့ခြေထောက်ကား ကားတွေထဲ ဒူးထောက်လိုက်ရင်း ၀ိုင်းစက်ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ အစုံပေါ်လက်တင်လိုက်တာ အိစက်နုညံ့နေတာကြောင့် ရင်တွေ တော်တော် ခုန်လာတယ်။
စာကြွင်း ။ ။ စောင့်ပြီးဖတ်ရတယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတို့ရေ Sorry နော်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်လဲ လက်သစ်ညီငယ် လေးတစ်ဥိးရဲ့ အခန်းဆက် ၀တ္ထုတွေကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပေးဦးမှာပါ။
Posted by Alex Aung at 7:07 PM2comments:
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တာ၊ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ယာက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာဟာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Orientation ကိုသင်သိရှိပြီးသွားရင် ဒါကို သင်လက်ခံရမှာပါ။ မိမိ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ အရင်လက်ခံပြီး အဲဒီလိုလူစားမျိုးဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလျာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ယောက်ျားလျာတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်များရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကို ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီဖိအားတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ယောက်ျားလျာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံဖို့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဖိအားတွေ ကျော်လွှားပြီး မိမိကိုယ်ကိုမိမိလက်ခံရာတွင် အကျိုးပြုနိုင်မယ့် အကြံပေးချက်အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းက ခေတ်မီအမြင်ကျယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
ယောက်ျား၊မိန်းမ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ယောက်ျားလျာဆိုတာကို လူတိုင်း လက်ခံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာယောက်ျားလျာတစ် ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သင့်ရဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ဖြန့်လိုက်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ သင်နဲ့သိတဲ့လူတိုင်းကိုလည်း လိုက်လံပြောပြနေစရာ မလိုပါ။ သင့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ သဘောထားသေးတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါ ထိခိုက်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာ ယောက်ျားလျာဖြစ်တယ်ဆိုတာက သင့်ကိစ္စပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနားလည်ဖို့သာ အရေး ကြီးပါတယ်။ အခြားသူများလက်မခံတာက သူတို့ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို အရမ်းထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုလက်ခံနိုင်မယ့် အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ပြောင်းရန် စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
သင်ယောက်ျားလျာဖြစ်ကြောင်းကို လက်ခံပေးနိုင်မယ့် မိဘများရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့ အချိန်ကောင်းရွေးချယ်ရန်လို အပ်ပါတယ်။ သူတို့ကို မှီခိုနေထိုင်နေရတဲ့အသက်အရွယ်မှာ အဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံဖို့မသင့်ဘဲ မိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိ ရပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ ယောက်ျားလျာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးဖို့ ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပေးထားကြပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း ယောက်ျား၊မိန်းမတွေ ပေါများတဲ့ လောကကြီးမှာ ယောက်ျားလျာအဖြစ် နေထိုင်အသက်ရှင်ရတာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သီးသန့်ခွဲထွက်နေသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ငါ့ကျမှ ဘာလို့ထူးခြားနေရတာလဲလို့ တွေးမိပြီး မိမိအဖြစ်ကို ၀မ်းနည်းနေနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံမှု၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို ခံစားရဖို့ သင်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲနေထိုင်နိုင်ခွင့် သင့်မှာ အပြည့်အ၀ရှိ ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လက်ခံမှု၊ လက်မခံမှုပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်လံပြောင်းလဲရတာ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ မိမိကိုယ်ကို လက်ခံလာအောင်၊ ယောက်ျားလျာ တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ များစွာရှိပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ယောက်ျားလျာတွေ၊ မိန်းမလျာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ သင်နဲ့ အခြေအနေတူတွေဟာ သင့် ကို ကူညီဖေးမပေးနိုင်ပါတယ်။ အုပ်စုအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်ပေးသူထံကိုဖြစ်စေ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြနိုင်တဲ့ နေရာတွေ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရှိပါတယ်။ အဲလိုမရှိရင် မိမိကို နားလည်ပေးနိုင်မယ့်လူ၊ ထောက်ပံ့အားပေးမယ့်လူတွေကို သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားရတာ လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။
ယောက်ျားလျာတစ်ယောက်ကို မိန်းမဖြစ်အောင် ပြန်လည်ကုသခြင်း ကုထုံးများကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့်အပြင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်စိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးက ကြေငြာထားပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်တည်း ထားခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိဘ၀ကို မိမိဆုံးဖြတ်ပိုင် ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်း အငြင်းပွားကြသူများရှိပါသေးတယ်။
Ref: Health Digest Journal Vol. (9), No (34) 11-7-2012
မိန်းမလျာများ၊ လိင်တူရော လိင်ကွဲပါ စုံမက်သူများ (Bisexual Men)နှင့် ယောက်ျားချင်း လိင်ဆက်ဆံသူ(MSM) အမျိုးသားအများစုက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ မိန်းမလျာများဟာ စိတ် ကျန်းမာရေး ပြဿများ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် အခွင့်အလမ်းကတော့ များပြားပါတယ်။ဆိုလိုတာက သူတို့ကိုဖိအားပေးနေတဲ့ အခြေ အနေမြောက်မြားစွာ ရှိနေပါတယ်။ မိန်းမလျာအများစုဟာ သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ အနုတ်လက္ခဏာ ဖိစီးမှုများ(မကောင်းတဲ့ စိတ် ဖိစီးမှုများ) ကို ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ သူတို့ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ ဖိစီးမှုများကတော့ လိင်တူများရဲ့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းခံရမှု၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရမှု စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူချင်း နှစ်သက်မှု Homosexuality ဟာ စိတ်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Homosexuality ရှိနေခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ရတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု၊ နှိမ့်ချမှု၊ လိင်တူချင်း(ယောက်ျားချင်း) ကရွံ့ကြောက်ခြင်းခံရမှုတွေကတော့ မိန်းမလျာများ၊ ယောက်ျားလျာများနဲ့ Bisexual များရဲ့ ကျန်းမာရေးကို မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေ သက်ရောက်စေပါတယ်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စည်းခြားခံရခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကို ဆယ်ကျော်သက်နဲ့အရွယ်ရောက်သူ မိန်းမလျာများမှာတွေ့ရပြီး သုတေသနအရ မိန်းမလျာတွေမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပွားမယ့် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုမြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ သုတေသနတွေအရ ပုံမှန်အမျိုးသားတွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရင် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နဲ့ ငယ်ရွယ်သူမိန်းမလျာများဟာ အဓိကစိတ်ကျရောဂေါ Major Depression ၊ စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါ (Bipolar Disorder) နှင့်ယေဘုယျ စိုးရိမ်သောကရောဂါ(Generalized Anxiety Disorder) ခံစားရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် မိန်းမလျာတွေဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်ခံစားရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဥပမာ - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ ပိုမိုသုံးစွဲဖွယ်ရှိခြင်း၊ သတ်သေခြင်း ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမလျာတွေဟာ သာမန် အမျိုးသားတွေထက် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေရန် ကြံစည်မှုပိုများပြီး သတ်သေရန် ကြံစည်မှုအောင်မြင်သွားခြင်းကလည်း ပိုများပါတယ်။ HIV ရောဂါပိုးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းမှုကလည်း မိန်းမလျာတွေကို ခြောက်လှန့်နေပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ပေးနိုင်ပါ တယ်။ ဥပမာ - သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖူးသူ၊ ပတ်သက်ဖူးသူ အမျိုးသားတစ်ဦးဦးတွင် HIV ပိုးရှိနေခြင်း၊ HIV ကြောင့် သေဆုံးခြင်းကို သိရ သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သူကိုယ်တိုင်မှာ HIV ပိုးရှိနေတဲ့အခါ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သူဟာ လိင်တူချင်း စုံမက်သူတစ်ဦး(မိန်းမလျာ)ဖြစ်ကြောင်း အခြားသူတွေ မသိရှိအောင် ဖုံးထားရတဲ့အခါ၊ သူ့ရဲ့အကြောင်းကို အခြားသူ တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိစေချင်ပေမယ့် ပြောရမှာကို ကြောက်ရွံ့နေတာတွေဟာ မိန်းမလျာတစ်ဦး ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ် ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ မိန်းမလျာဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်နေထိုင်သူဟာ ပုန်းကွယ်နေသူတွေထက်ပိုပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းကြောင်းတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့လာရနိုင်တာတွေကို အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ လက်ခံရင် ပုန်း ကွယ်နေသူထက် စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာပိုပြီး ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့၊ အကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိဖို့၊ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေအောင် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဘာလုပ်ရမလဲ
မိန်းမလျာတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖိစီးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ပါ တယ်။ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းများထံမှ လူမှုရေးထောက်ပံ့မှု (အားပေးကူညီမှု၊ အဖော်အပေါင်းပြုပေးမှု၊ ခင်မင်မှု၊ မေတ္တာ) မရရှိခဲ့ရင် လူ့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူမှုရေး၊ အားကစား၊ ဘာသာရေးနဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။
စိတ်ကျန်းမာရေးနှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးမှုနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ မိန်းမလျာများ အထူးသဖြင့် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်သောကရောဂါ၊ အခြား စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ခံစားနေရတဲ့ မိန်းမလျာများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမလျာအများစုဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ မှာကို ကြောက်ရွံ့တာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်ကုသမှုကို မခံယူတာများပါတယ်။
မိန်းမလျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန်လူပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခု ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့် ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်၊အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်သင့်ခံတဲ့စိတ်၊ အများအကျိုးဆောင်လိုသော ပရဟိတစိတ်များထားရှိခြင်း၊ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာများကို အမြဲမပြတ်ဆည်းပူခြင်း၊ တက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကို အကောင်းမြင်စိတ်ထားပေးခြင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခု ရရှိလာခဲ့ရင်လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ကုသမှု ခံယူခြင်းတို့ဖြင့် လက်ရှိဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 10:17 PM No comments:
ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ အမြဲစိတ်ကူးယဉ်တောင့်တမိခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား ဒါမှမဟုတ် ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံချင် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် (ပြပွဲအခမ်းအနား၊ သစ်တစ်ပင်အောက်၊ chat room ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် sauna တစ်ခုမှာ ဆုံခဲ့ရသောသူ) ကို အမှန်တကယ် ပတ်သက်ရ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ရင် ဘယ်လိုများ ပြုမူမိမှာပါလိမ့်။ တကယ်လို့များ လိင်ကိစ္စကို ကျေနပ်ဖွယ်ပတ်သက်မှု သူနဲ့ရရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ရော စိတ်ထဲ ဘယ်လိုများ သဘောထားမိမှာပါလိမ့်။ ကဲ ဒီမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးရင် ပြင်ဆင်ထားရမယ့် စိတ်နေစိတ်ထား သဘော ထားလေးတွေ အပြုအမူလေးတွေ။
နှစ်ဦးသားပတ်သက်ပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့အထိ SMS ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Mail Message ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်ခဲ့တာကို ပြန်မဖြေခဲ့ မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တုန့်ပြန်ဖို့ အရိပ်အယောင်မပြခဲ့ရင် ဆက်ပို့တာမျိုး အီးမေးလ်ဆက်ပို့နေတာမျိုး မလုပ်ပဲ သူဘာကြောင့် မတုန့် ပြန်တယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင် ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါကို မသိသားဆိုးရွားစွာ ဆက်လုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က မလို လားဖွယ် မက်ဆေ့စ်တွေ၊ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးစွာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ပြုမူဆက်ဆံပြော ဆိုပါ။
ဖုန်းမက်ဆေ့စ်ပို့တာ မေးလ်ပို့တာတွေဟာ နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တည်လာပြီဆိုမှ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ (အရည်မရအဖတ်မရ ကျူတဲ့ မက်ဆေ့စ်မျိုးလို စာတွေလို အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။)
ပြောခဲ့တဲ့အချက်အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရင်တော့ နှစ်ဦးသားကြား နှစ်လိုဖွယ်ရာအချက်တွေ ပဲရှိနေစေချင်တာ၊ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မိသူတိုင်း စိတ်ကသိကအောက်မဖြစ်ရအောင်ပြုမူစေချင်တာ၊ နောက်တစ်ကြိမ်ပတ်သက်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နာမည်ကြားတာနဲ့ အကောင်းမြင် အောင်ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါဝင်တာကိုသိနိုင်ပါတယ်။
Ref: Q Magazine (Australia Gay Magazine)
Note: အဟောင်းတွေချည်းပြန်တင်နေတယ်လို့တော့ အပစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့ ဘော်ဒါတို့ရေ။ စာအသစ်တွေက ရေးလက်စတန်းလန်း ဆိုတော့ကာ အသစ်မဖတ်ရသေးခင်စပ်ကြား အရင်နှစ်တွေကတင်ခဲ့တဲ့အထဲက ဖတ်ဖို့သင့်တာလေးတွေကိုပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:17 PM 1 comment: